Tsahivina moa fa tamin’ny 2 ora maraina ny sabotsy teo, nisy mpiasan’ny fiambenana nanatanteraka fanamarinana ireo mpiasa sahaniny izay an’ireny orinasan’ny « sécurité civile » ireny. Lasan’ireo malaso ny môtô « 125 cc » sy ny fanalahidy ary ny aro lohan’izy ireo teo Andraharo. Araka ny tatitra dia mamono amin’ny fampiasana « big boss » sy antsy maranitra izy ireo. Nanamarina ny polisy eo Antaniavo fa “mpiasan’ny haino aman-jery taloha ny iray tamin’ireo jiolahy mpanendaka voasambotra, raha nampiseho karatra maha mpiasan’ny orinasan-tserasera azy rehefa voasambotra. Nohamarinin’ny mpitandro filaminana tany am-piasany ka voalaza fa efa tsy niasa tany amin’ilay fahitalavitra intsony izy saingy tsy namerina ilay karatra. Mpiambina no asan’izy io tao amin’ilay orinasan-tserasera”, hoy ny polisin’Antaniavo raha nifampiresaka tamin’ny mpanao gazetinay. Araka ny loharanom-baovao hafa dia miharihary ilay soratra “Presse” eo amin’ilay karatra fa eny amin’ny faritra ambany no ahitana ilay asa maha mpiambina. Marihina moa fa niara-niakatra fampanoavana omaly tamin’ireo jiolahy nanendaka fiara tsy mataho-dalana izay nitranga ora iray mialoha io izy ireo. Mbola teo am-panenjehana ireo jiolahy telolahy nanakana fiara 4X4 teo amin’ny farmasia Ankazomanga ireo polisy no naharay antso ka nihazo an’Andraharo.